Thwebula Gmail 6.10.23.137993986 isizulu – Vessoft
Gmail – a software ukuphatha imeyili kusuka service Google. Izici main of the software zihlanganisa imiyalezo, umsebenzi kanye mail ngaphandle ukufinyelela internet, ukucinga amafolda umyalezo, Ukuvinjwa spam, autofilling ikheli bar njll Gmail izinhlobo ngokuzenzakalelayo ngemiyalezo ezigabeni ezahlukene eyenza ukuba ngokushesha ukubuka ulwazi oludingekayo. Gmail ikuvumela ukuphatha imeyili esebenzisa akhawunti ezahlukene kanye nokusetshenziswa izilungiselelo amisiwe. Isofthiwe ine interface enembile futhi kulula ukuyisebenzisa.
Ukuphathwa Kalula imeyili
Ukusekela for akhawunti ahlukene
Interface elula enembile
Amazwana on Gmail:
Gmail Ahlobene software:
E-mail Isofthiwe ukuphatha ibhokisi leposi kusukela Yahoo service. Isicelo intuitively ihambisa imiyalezo engenayo zigaba ezahlukene ukubukwa esikahle.
Abanye Isofthiwe for okusheshayo taxi yokubhuka emazweni ahlukene emhlabeni. Isicelo ubiza ngokuzenzakalelayo itekisi eliseduze futhi ubonisa ukuhamba kwayo ebalazweni.
English, Afrikaans, Français, Español... Adobe AIR 21.0.0.176
Office Easy ukusebenzisa isofthiwe ukusebenza kubukiswa. Isofthiwe isekela inqwaba amathuluzi for izinga design of kubukiswa.
English, Українська, Français, Español... YouTube 11.41.56